Wararka Maanta: Sabti, July 7 , 2012-Ciidamada DKMG ah iyo kuwa AMISOM oo howagllo lagu soo qabqabtay Boqolaal qof ka sameeyay Magaalada Muqdisho
Degmooyinka howgallada laga sameeyay ayaa waxay kala ahaayeen: Huriwaan, Yaaqshiid iyo Kaaraan, iyadoo ciidammo fara badan lagu arkayay xaafadaha ay ka kooban yihiin degmooyinkaas.
"Waxaa howgallada maanta lagu soo qabqabtay 300 oo ruux, kuwaasoo baaris lagu hayo, ciddii ay ku caddaato inay ka tirsan tahay Al-shabaab shaciga ayaa la hor-geyn doonaa, ciddii lagu waayana waa la sii daynayaa," ayuu yiri Col. Khaliif Axmed Ereg oo ah taliyaha ciidamada nabadsugidda gobolka Banaadir.
Saraakiil kale oo hoggaaminaya howlgalka ayaa iyaguna sheegaya in lasoo qabtay qalabka laga sameeyo walxaha qaraxa oo isugu jiray budooyin iyo biro, iyagoo intaa ku daray in gacanta lagu dhigay raggii haystay alaabtan.
Howgalladan oo ay ka qaybqaadanayeen ciidamada nabadsugidda, kuwa milateriga iyo booliiska DKMG ah iyo ciidamada AMISOM ayaa waxay u sameynayeen guri-guri iyadoo intii howgalladu ay socdeen la joojiyay isku socodka dadka iyo gaadiidka waddooyinka gala iyo kuwa ka baxa degmooyinkaas.
Maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada DKMG iyo kuwa AMISOM ka sameeyeen Muqdisho howgallo lagu soo qabtay kumannaan dhallinyaro ah, iyadoo la sheegay in baaris la sameeyay lagu ogaaday in 235-ruux oo ka mid ah ay xiriir la lahayeen Al-shabaab.